मिस नेपाल वर्ल्ड–२०१९’को ताज अनुष्काले पहिरिन् - Sagarmatha Online News Portal
मिस नेपाल वर्ल्ड–२०१९’को ताज अनुष्काले पहिरिन्
काठमाण्डौ . यस बर्षको मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि अनुष्का श्रेष्ठले जितेकी छिन् । मिस नेपालको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी २४ प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछाडी पर्दै अनुष्काले मिस वल्र्डको उपाधि जितेकी हुन् । सो कार्यक्रमका मुख्य निर्णायक इला शर्माले सोधेको ‘हामीले अधिकार भन्दा कर्तव्यलाई ध्यान दियौं भने यो संसार राम्रो बन्न सक्छ होला ? तपाई यसमा के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिदै अनुष्काले उपाधि जितेकी हुन् ।
कार्यक्रममा गायक दिपक बज्रचार्यले ‘मनमगन’ बोलको गीत प्रस्तुत गरे भने रचना गुरुङले अंग्रेजी गीत गाएकी थिइन् ।
‘मिस नेपाल’ आयोजनाको २५ औं बर्ष पुगेको अवसरमा यसपटक पूर्व मिस नेपालहरुलाई समेत सुरुवातमै स्टेजमा निमन्त्रणा गरिएको थियो ।
Published On: २७ बैशाख २०७६, शुक्रबार 318पटक हेरिएको
छविले शिल्पासँग माफी माग्दै गरे लिखित सहमति !
प्रियंका धोकेवाज मायाको खेलमा
छविले शिल्पालाई कानको जाली फुट्नेगरी कुटेपछि …!